बिहीबार ५ जिल्लाको प्रावि तहको नतिजा सार्वजनिक (नामसहित) - Dainikee News::
बिहीबार ५ जिल्लाको प्रावि तहको नतिजा सार्वजनिक (नामसहित)
भक्तपुर, मंसिर २० । बिहीबार शिक्षक सेवा आयोगले ५ जिल्लाको नतिजा सार्वजनि सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक भएका जिल्लाहरुमा तेह्रथुम, बझाङ, संशुवासभा, दार्चुला र बाजुरा रहेका छन् । त्यसैगरि आयोगले बुधबार बैतडी, डडेलधुरा, इलाम, झापा, पाँचथर जिल्लाको प्रावि तहको नतिजा प्रकाशन गरेको थियो । मंगलबारदेखि अस्थायी शिक्षकको प्राथमिक तहको नतिजा प्रकाशन गर्न शुरु गरेको हो । आयोगले मंगलबार प्रावि तहको ताप्लेजुङ र कञ्चनपुर जिल्लाको नतिजा सार्वजनिक गरेको थियो ।
नतिजा प्रकाशनकै क्रममा आजसम्म विभिन्न विषयको विभिन्न क्षेत्रको मा.वि. र नि.मा.वि. तहको विभिन्न विषयहरु नितिजा सर्वजनिक गरिसकेको छ। भने प्रावि तहको धेरै जिल्लाको नतिजा बाँकी रहेको छ ।
कार्यरत अस्थायी शिक्षकको प्राथमिक तहको तेह्रथुम जिल्लाको नतिजा प्रकाशन
कार्यरत अस्थायी शिक्षकको प्राथमिक तहको बझाङ जिल्लाको नतिजा
प्रकाशित मिति: बिहिबार, मंसिर २०, २०७५ /Thursday, December 6th, 2018, 6:40 pm